Burburinta tirooyinka kansarka metastasis - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB Burburinta tirooyinka kansarka metastasis
Xoqidda nambarka kansarka naasaha
Unugyada kansarku inta lagu jiro qeybta unugyada. Deynta: Machadyada Qaranka ee Caafimaadka
Cudurka metastasis, unugyada kansarka ayaa ka jabaya burooyinka asalka ah waxayna xidid ku yeeshaan gobol kale oo ka mid ah wareegga dhiigga. Si loo kala qaado, unugyada metastatic waxay ka gudbaan endothelium-carqalad ku timaadda unugyada endothelial ee xidhma nidaamka wareegga dhiigga ee xakameynaya gudbinta agabyada socodka dhiiga-dabeecad aan aheyn sidii ay unoqdeen unugyada metastatic-ka.
Daraasad lagu daabacay Warbixinno cilmi ah, qoraaga koowaad Yamicia D. Connor, MD, PhD, degane kuyaal waaxda dhakhaatiirta dumarka iyo kansarka dumarka ee Xarunta Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), iyo asxaabta, ayagoo shaaca ka qaaday in unugyada aan caadiga ahayn, unugyada metastatic naasaha ay leeyihiin Awoodda beddelista qaabka, u leexashada si waxtar leh looga gudbo endothelium-ka oo loo gudbo socodka dhiigga. Marka lagu daro muujinta isbedelka, kooxdu waxay horumarisay a Qaabka xisaabta si tiro loogu muujiyo is dhexgalka ka dhexeeya metastatic iyo unugyada endothelial in si fudud loo beddeli karo.
Xogtayada ayaa muujineysa in unugyada metastatic naasaha ay si wax ku ool ah u shaqeeyaan, laakiin ay awoodaan inay beddelaan qaabkooda si ay u caawiyaan socodka dhiigga, oo tallaabo muhiim ah u ah faafitaanka kansarka, ayuu yidhi Connor. "Daraasaddu waxay muujineysaa sida moodooyinka xisaabeed loogu dari karo nidaamyada noolaha si ay u bixiyaan oo u meel-dhigaan aragtiyada muhiimka ah ee cilmiga bayoolojiga iyo suurtagalnimada in la tijaabiyo bartilmaameedyada daroogada."
Iyagoo adeegsanaya isla xisaabtan, cilmi-baarayaashu waxay soo sheegeen in dhaqankan uu ku xaddidan yahay kansarka naasaha ama cudurrada metastatic. Daraasad gooni ah, kooxda Connor waxay sahamineysaa haddii ugxan-sidaha unugyada kansarka sidoo kale waxaa laga yaabaa inay la falgalaan endothelium sida unugyada kansarka naasaha.
Toni Golen, MD, oo ah gudoomiye kuxigeenka waaxda dhalmada iyo cudurada haweenka ee BIDMC, ayaa yiri "Natiijooyinkaan waxay soo bandhigayaan qaab lagu baaro awooda burooyinka ee cudurka kansarka '3-D. "Tani waxay u adeegi kartaa asaaska baarista mustaqbalka si loo baaro bal in la xakameeyo is dhexgalka jirka ee u dhexeeya unugyada metastatic iyo noocyada kale ee unugyada waxay bixin karaan fahanka habka farsamada ee loo yaqaan 'metastatic disease' oo loo adeegsan karo jiheynta go'aannada daaweynta. "
'Furaha' tababarka tababarka metastasis
Yamicia Connor et al, Moodeel xisaabeed oo ah is-dhexgalka buro-endothelial ee wada-dhaqanka 3D, Warbixinno cilmi ah (2019). DOI: 10.1038/s41598-019-44713-2
Xarunta Caafimaadka ee Israel Israel Deaconess
Burburinta tirooyinka kansarka metastasis (2019, July 17)
laga soo qaaday 17 July 2019
ka socota https://medicalxpress.com/news/2019-07-crunching-cancer-metastasis.html
Dukumeentigaan wuxuu ku xiran yahay copyright. Marka laga reebo wax kasta oo cadaalad ah oo ku saabsan ujeedada waxbarashada gaarka ah ama cilmi baarista, maya
qaybta waa la soo saari karaa iyadoon fasax qoraal ah lahayn. Macluumaadka waxaa loogu talogalay ujeedooyinka macluumaadka kaliya.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://medicalxpress.com/news/2019-07-crunching-cancer-metastasis.html
Kombiyuutarka labaad ee lagu daweeyo kansarka naasaha ayaa ku daray Sanduuqa Kansarka ee Kansarka ee England